Mametraka HP Multifunction amin'ny ArchLinux | Avy amin'ny Linux
Mametraka HP Multifunction amin'ny ArchLinux
Salama mpiara-miasa, ity misy torolàlana kely momba ny fametrahana multifunction HP amin'ny ArchLinux.
Voalohany indrindra dia tsy maintsy mametraka fonosana lehibe sasany isika:
Aorian'ny fametrahana ireo fonosana ireo dia manohy mamorona serivisy izahay ary manomboka azy ireo.
Raha tsy nanao izany izy ireo nandritra ny fametrahana dia tsy maintsy ampidirinay ao amin'ilay vondrona ny mpampiasa anay lp sy ny vondrona scanner:
Vantany vao apetrakao ireo fonosana, ary ampidirinay amin'ireo vondrona voalaza etsy ambony ireo mpampiasa anay, dia tsy mila manamboatra ny mpanonta fotsiny izahay.
Ny baiko teo aloha dia mitaky tranomboky sasany mihazakazaka, raha tsy te-hametraka azy ireo ianao ary manao ny fikirakira ao amin'ny terminal, ampio fotsiny ny -i amin'ny baiko.
Ny efijery asehony antsika io dia tena intuitive.
Tena azo antoka fa multifunction USB izy, manome fotsiny [Ampidiro] amin'ny baiko voalohany, ary valio fanontaniana vitsivitsy vitsivitsy, izay ahafahanao manome anarana ilay fitaovana, ary raha te-mamaritra toerana iray ianao. Ohatra: Multifunction 1, miaina.
Raha vantany vao vita izany dia ilaina ny mametraka rindrambaiko sasany hizaha azy, satria afaka manonta na aiza na aiza misy antsika, Libre Office, sns.
Tiako manokana ny Simple-Scan
Hametraka fiankinan-doha sasany izy io.
Rehefa vitanao ny mametraka raha toa ka manokatra tsindry tsotra ianao dia azo antoka fa milaza aminao izy fa tsy mahita fitaovana izy io, izao dia voavahanay izany.
Raha vantany vao mahita izany dia ilaina ny miroso amin'ny tsy fanarahana tsipika ara-tsaina.
Amin'ny farany, dia tsy tantinay ny andalana milaza azy hpaio
Toy izany koa:
Tokony ho toy izao:
Mitahiry sy manidy.
Eny, manandrana ilay scanner izahay, afaka manao izany amin'ny alàlan'ny terminal:
Na mandeha amin'ny scanner tsotra izahay ary manova zavatra.
Izay ihany aloha, manantena aho fa nanampy. Izay fanontaniana rehetra dia fantatrao 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Mametraka HP Multifunction amin'ny ArchLinux
Tena tsara, tsy manana fialantsiny tsy hanonta na hanao scan aho. Misaotra amin'ny fampidirana.
Tsisy fisaorana. Manome fifaliana izany fanompoana izany.
Raha lazainao amiko ny fomba fanaovana ny mpanonta pirinty Epson CX-5600 ao amin'ny Arch dia hataoko tsangambato ianao… ary alefaso ny Server Ubuntu ananako ho an'ny mpizara pirinty! 😀
Sooooy, sooooy mpanafika aho !!!
Tokony ho hitako raha mahazo namana manana Epson hanandrana aho. Raha vantany vao mahazo aho dia manao ny fitsapana mifandraika sy ny torolàlana mifandraika amin'izany.
Raha mahita ny ampinga, ny an'ny avatar ahy ianao, dia ho hitanao fa tsy an'i Ñuls izany.
Amin'izao fotoana izao, tsy olana ny fametrahana mpanonta HP ao anaty andohalambo, manana HP laserjet 2200D (dinôzôra efa an-taonany xD) niasa tsy nisy fihemorana aho, inona koa, gaga aho nahita azy tao amin'ny lisitry ny mpanonta nefa tsy nanana aho mifangaro amin'ny zavatra iray anefa, rehefa mametraka kaopy mametraka ireo fonosana voalaza ao amin'ny lahatsoratra.
Raha ny Epson, hoy ny msx, dia hataoko alitara ianao ary hiankohoka aminao aho raha mampianatra anay hanao mpanonta printy Epson amin'ny Linux ianao, manana epson multifunctional miaraka amin'ny cartridges tsirairay aho, ary tsy misy fomba fiasa hita maso, ny scanner ihany no ampiasaiko. , fa mahamenatra ny tsy mahay manonta amin'ny loko D:
volana lasa izay dia nanaraka torolàlana momba ny sofina aho, fa ny tena azoko dia ny nisintona ny pejy ary nanonta teboka maro, nanandrana sary aho, lahatsoratra ary mitovy amin'izany, avy eo nanandrana izany tamin'ny PC misy rivotra aho (satria eo amin'ny andohalambo pc-ko no hany OS ) ary niasa tsara ny fanontana: / noho izany, ao ny xDD ny fanamby
fihobiana ^ w ^
@Leproso: tsy mahita joraca ny ampinganao ianao! Ary tsy mpamitaka xD aho
@helena: ny multifunction nolazaiko tao amin'ny Ubuntu dia tonga lafatra, _satr'izay_, izany no antony tokana nametrahako 12.04 ho mpizara multigpose ao an-trano 😛
Na dia tokony hibaboka aza aho: hatramin'ny nametrahako ny Ubuntu dia nisafidy 12.04 LTS aho ka hanadino ny olan'ny fanohanana mandritra ny taona maro manaraka ... indrisy natanjaka kokoa ny pacmanitis maranitra ahy ary rehefa afaka kelikely dia nanavao ny mpizara ho 12.10 = 'D
Lahatsoratra tsara Hiezaka ny hitazona izany eo am-pelatanako aho. 🙂
Junma dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ilay mpitari-dalana. Madio toy ny rano. Nanompo ahy ho an'i Manjaro io
Valiny tamin'i Junma
Churrero dia hoy izy:
Niezaka ny nampihatra an'ity torolàlana ity tamin'ny mpanonta LaserJet 1018 tao Manjaro aho, saingy tsy nisy azo natao. Tsy nanana olana tamin'ny fampidirana an'ity mpanonta ity tamin'ny fizarana Linux hafa aho saingy tsy misy lalana eto. Ity no ambarany amiko rehefa manandrana manonta ny pejin'ny fitsapana: »(dingana: 8897): GConf-WARNING **: Tsy nifandray tamin'ny Demoniona D-BUS ny mpanjifa:
Tsy nahazo valiny. Ny antony mety misy dia ny: ny rindranasa lavitra dia tsy nandefa valiny, ny politikam-piarovana bus bus nanakana ny valiny, tapitra ny ora fiandrasana, na tapaka ny fifandraisana. »
Miaraka amin'ny teny Anglisy mahatsiravina tsy haiko izay tiany holazaina. Afaka manome tànana ahy ve ianao?
Valiny tamin'i Churrero
Ianao ve nanandrana ny mpitari-dalana ao amin'ny Arch? Manjaro dia tsy Arch.
Mazava ho azy. Niezaka ny zavatra hitako rehetra tany aho. Any Manjaro, na any Kde na Xfce, dia tsy mandeha izany. Avelao aho hanazava mba hanananao hevitra: Raha atsipiko ity baiko manaraka ity: «sudo hp-setup -i» manomboka miasa ny console ary manandrana misintona ireo mpamily avy amin'ny tranokala ofisialy aza, saingy amin'ny farany dia manome ny lesoka nolazaiko tetsy ambony. Hiteny aho fa mbola tsy manana fanohanana vaovao. Etsy ankilany, raha manandrana manao azy amin'ny fampiasana "http: // localhost: 631 /" aho, dia milaza ihany koa hoe tsia. Mampalahelo fa ny fizarana miavaka, indrindra ny Xfce, dia manana an'ity drawback ity. Ataoko anaty solo-sainako io na dia tsy afaka manampy ny mpanonta aza aho. Salam, Kikilovem.
sanosuque dia hoy izy:
Misaotra betsaka fa efa nanandrana tamin'ny fomba rehetra aho
Mamaly an'i sanosuque
Jamil dia hoy izy:
Tutorial tsara !! Izy io dia niasa ho ahy tao amin'ny Antergos-ko, nanana ny Hp PhotoSmart C3 nandritra ny 4280 taona aho ary manohy mikarakara izany, heveriko fa tsy hanova azy mihitsy aho haha ​​ela velona Linux!
Mamaly an'i Jamil
Luque dia hoy izy:
Misaotra, tena nahasoa izy io!
Valiny tamin'i Luque
Misaotra anao fa nanampy be dia be ahy io, ny marina dia saiky hanary lamba famaohana aho
Na baiko gpasswd dia tsy hita na tsy misy anaran'ny mpampiasa. Na ny fihazakazahana dia 'sudo gpasswd -a [solonanarana] scanner'. Tsy misy intsony, tutorial tena tsara! Obrigado - Misaotra!
davidsf dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ilay lahatsoratra, tena nanampy be ahy izany! 🙂
Valio amin'i davidsf
Palmira dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao, afaka nanao scan aho nanaraka izay notondroinao, manana vady arcolinux amin'ny solosaina intel 7 gen aho ary miasa tsara miaraka amin'ilay scanner ilay mpanonta.
Mamaly an'i palmira
Ahoana ny fomba fampidinana renirano amin'ny terminal
Wallpaper miisa 5 tsara ho an'i Debian